630A Qalabka Alaabada Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha | Shiinaha 630A Cable Accessories Warshad
15Kv630ADeadbreak T Fore Isku xira
Anhuang oo ku takhasusay barnaamijka loo yaqaan 'Deadbreak T Fore Connector', waxaan siineynaa tayo sare oo dhimis ah T Jidka isku xira. Codsiga: ● Ku xirnaanta fiilada polymeric-ka ee loo yaqaan 'transformers', qalabka korontada lagu beddelo, matoorrada iyo qalabka kale ee leh isku xiraha kala-goynta ee horay loo sameeyay. ● Qalabka gudaha iyo dibedda. Voltage Qalabka korantada illaa 24 kV. Current Xilligan socda 630 A (900 A overload for 8 hours). Partic Waxyaabaha ay ka kooban tahay xargaha: - Fiilooyinka Polymeric-ka (XLPE, EPR, iwm.) - Copper ama aluminium koronto bixiyayaal - Semiconduc ...
12-24kV 630A Laba Dhinac Bushing
Anhuang oo ku takhasusay Deadbreak T Rear isku xira, waxaan ku siineynaa isku xir xiraha 'Deadbreak T Rear Connector' oo tayo sare leh. Guud ahaan ： 630A Nooca Nasashada ee Nooca Isgoyska waxaa loogu talagalay Qeybta Awoodda Dibadda iyo Qeybta Awoodda Dhulka. Waxay ku habboon tahay sanduuqa laanta, ku wareegsan golaha korontada ee qaabka Yurub, waxayna ku xirmi kartaa 630A Shield Fore Connector. Tusmooyinka Qalabka: Type Nooca Dilaaga ah Isgoyska et Xaashida Waxbaridda Rakibaadda Application Codsiga Shahaadada Tayada Tusaale: Tixraaca Sharaxa ...
Qalabka Bushings Insert
Anhuang oo ku takhasusay qalabka loo yaqaan 'Bushing Insert Insert', waxaan bixinnaa qalab tayo sare leh oo loo yaqaan 'Bushing Insert Insert'. Guud ahaan ： 630A Qalabka Gawaarida Gawaarida waxaa loogu talagalay nooca yurubiyanka Cable Cabinet, Golaha Wasiiradda Quwadda Awoodda, Oo Loo Adeegsaday Nooca Yurubiyaanka Kabaha Golaha Cable ee isku xira danab sare. Bushings Kuwani waxay ku xirmi karaan xiraha isku xiraha fiilada. Dhirtaani waxay ku samaysan yihiin iyadoo la isticmaalayo dahaadh daaweyn baaruud leh oo tayo sare leh oo ah Epoxy Resin Rubber. Tusmada Kit ： l Qalabka Bushings Geli l ...
Diyaarad TGZ-1225kV 630A ah
Anhuang oo ku takhasusay Air Bushing, waxaan siineynaa Hawada Duulista oo tayo sare leh. Guud ahaan ： 630A Hawada Duullimaadka waxaa loogu talagalay nooca yurubiyanka ah ee Golaha Cable Cable, Golaha Wasiiradda ee Ku Wareegta Awoodda, Waxaa loo adeegsaday nooca Golaha Yurub ee Cable Laanta isku xira danab sare. Lagu rakibay sanduuqyo la buufin karo si loogu xiro Nooca 630A isku xiraha 630A. Bushings Kuwani waxay ku xirmi karaan xiraha isku xiraha fiilada. Dufankan 『e ay sameeyeen Epoxy Resin iyo baarka naxaasta oo leh farsamooyin iyo farsamo wanaagsan ....
Dhimashada Wadajirka ah ee Iskujira
Anhuang oo ku takhasusay Isku-darka Burburka 'Integral Dead break Bushing', waxaan siineynaa tayo sare leh Isku-darka Burburka Dhimashada. 12kV 630A Dahaarka Burburka Dhimashada waxaa loogu talagalay Golaha Khadka Cable ee leh Sf6 Switch. Xidhiidhiyeyaasha kala go ', sida 630A T iyo T-11 iskuxirayaasha nasashada dhimashada ayaa loo isticmaali karaa bushingkan. Dhirtaas waxaa sameeya Epoxy Resin. Iyada oo goonnada ka dhigo jebinta dhimashada Rotatable Feed-ilaa bushing si fiican ayaa loo isticmaali karaa. Tusmooyinka Qalabka: ● Isku-darka Burburka Dhimashada ● Daboolka daboolka ● Rakibaadda Ins ...
Isku xiraha SJT 15630A
Anhuang oo ku takhasusay isku xiraha iskutallaabta, waxaan bixinnaa isku xiraha iskutallaabta oo tayo sare leh. Codsiga: l Ku xirnaanta dahaarka shaashadda ayaa lagu gaari karaa inta u dhexeysa isku xirnaanta isku xirnaanta badan. l Danab Nidaamka: 8. 7 / 15kV \_ 12 / 20kV. l Xaddiga joogtada ah ee la qiimeeyay: 630A \_ 1250A. Astaamaha: l Markii lagu daro noocyada dhirta ee Nooca C, waxaa la bixinayaa isku xirnaan buuxda oo hermetically ah oo lakala sooci karo. Naqshad la'aan, naqshad ku xir. l Busbar oo ka soo jeeda weelka naxaasta ah ee （tuubada) halabuurka, dusha sare ...
Wadajirka 'DJT 5630A T'
Anhuang oo ku takhasusay T-wadajir, waxaan siineynaa tayo sare leh T-wadajir. Codsiga: l Xiriirinta shaashadda qalabka wax lagu beddelo ayaa lagu gaari karaa inta u dhexeysa isku xirnaanta qalabka kala duwan. l Danab Nidaamka: 8. 7 / 15kV \_ 12 / 20kV. l Xaddiga joogtada ah ee la qiimeeyay: 630A \_ 1250A. Astaamaha ： l Marka lagu daro Nooca C bushings, isku xirnaan buuxda oo gebi ahaanba hermetically kala sooc ah ayaa la bixiyaa. Naqshad la'aan, naqshad ku xir. l Busbar oo ka soo jeeda weelka naxaasta ah ee （tubbada) halabuurka, dusha sare ee silikoon isku dhafan ...
Anhuang oo ku takhasusay Apparatus Bushing, waxaan bixinaa qalab tayo sare leh. Guud: 35kV 630A Qalab Bushing ah waxaa loogu talagalay nooca yurubiyanka Cable Cabinet, Golaha Wasiiradda Quwada Awoodda, Oo Loo Adeegsaday Nooca Yurubiyaanka ah ee xarigga xarigga isku xira danab sare iyo tamarta dabaysha. Bushings Kuwani waxay ku xirmi karaan xiraha isku xiraha fiilada. Dhirta waxaa lagu sameeyaa Epoxy Resin oo leh farsamooyin farsamo iyo koronto oo wanaagsan. Qiimeynta Danab: Sharaxa Paramete ...
Anhuang oo ku takhasusay 630A / 1250A Busbar, waxaan bixinnaa Busbar tayo sare leh. Guud length Dhererka baska L ilaa labo qalab kala beddelashada mashiinka masaafada udub dhexaadka u ah salka, markii la amrayo in la bixiyo cabirro; haddii Basku Dhererkiisu yahay aasaaska, fadlan caddee. Dalbashada Macluumaadka ： Faahfaahin Tixraace Lr 12kv 630A / 1250A Bus Bar AH MX-12/630/1250 24kv 630A / 1250A Bus Bar AH MX-24/630/1250
Nooca Isku Xiraha Xirmooyinka La Taaban Karo
Anhuang oo ku takhasusay connetype isku xiraha hore ee taabashada, waxaan bixinaa tayo sare π nooca isku xiraha hore ee taabashada. Guud ahaan ： Nooca isku xiraha hore ee la taaban karo waxaa loo isticmaalaa shabakada giraanta sanduuqa ka hor, laanta fiilada ee sanduuqa ama sanduuqa ayaa noqda nidaamka guud ee nidaamka giraanta giraanta, sida isku xirnaanta iyo soo galka fiilooyinka. Wuxuu ku xirmi karaa isgoyska 630A iyo wixii ka dambeeya waa inuu taabtaa isku-darka wadajirka ah si loo abuuro wareeg badan oo isku xiran Xilliga la qiimeeyay ee nooca T isku xiraha hore waa 630A, codso 25-300m ...
35kV Shielded T gadaal gadaal u ah
Anhuang oo ku takhasusay barnaamijka loo yaqaan 'Deadbreak T Rear arrester', waxaan siineynaa tayo sare oo loo yaqaan 'Deadbreak T Rear arrester'. Guud ahaan ： 35 / 78kV Qaabka yurubiyanka ah oo ay ku xigto arrester wuxuu bixiyaa shabakad danab dhexdhexaad ah oo lagu kalsoonaan karo ilaalin kara. iyagoo isticmaalaya gaashaan-wadaha si loo hubiyo inuu qofku nabad qabo oo qalabku si fiican u shaqeyn karo, sidoo kale waxay leeyihiin tiro aad u badan si loo hubiyo inay ku shaqeyn karaan duruufaha. 35 / 78kV Qaab-dhismeedka yurub ee qaab-dhismeedka yurub ayaa loo wada isticmaali karaa isku xiraha hore ee yurub. Codsiga ...
35kV 630A T Isku xira Cable
Anhuang oo ku takhasusay T Cable isku xira, waxaan siineynaa isku xira T Cable isku xira tayo sare leh. General ： 35kV 630A T Cable Connector wuxuu bixiyaa isku xir buuxa oo si buuxda loo baaray lana jabin karo markii lagu waafajinayo duurka ama fiilada saxda ah. Isku xidhka fiilada polymeric-ka ee loo yaqaan 'transformers', qalabka korontada lagu beddelo, matoorrada, iyo qalabka kale ee leh isku xiraha kala-goynta dib loo furay Barta tijaabada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ahi waxay u oggolaaneysaa hubinta fudud ee xaaladda wareegga ama rakibidda tilmaame cillad. Kuwani 36kV 630A T Cable Co ...